ရေဘေးသင့်ဒေသများ အပါအ၀င် ဒေသအများစု မိုးကောင်းမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး ~ Myaylatt Daily.
ရေဘေးသင့်ဒေသများ အပါအ၀င် ဒေသအများစု မိုးကောင်းမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး
Ko Myo Spu shared 7Day News Journal's photo.
မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က လက်ရှိ ရေဘေးရင်ဆိုင်နေရသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့အပြင် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ရခိုင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးကောင်းဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
လာမည့်ရက်များတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ်အရှိဆုံးဒေသများအဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းဒေသများကို ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိပေးထားသည်။
ဓာတ်ပုံ− Tun Lwin Facebook